Ungakuthatha njani ukuBhengeza kabini usebenzisa i-SLR yakho yedijithali
Ukuba ukhe ufune ukuba secaleni kwakho, ungasebenzisa i-SLR yakho yedijithali ukuthatha ukubonakaliswa kabini. Ukuvezwa ngokwesiko kabini yimifanekiso emibini kwifreyimu enye yefilimu; kuba usebenza ngokwamanani - akukho bhanyabhanya ibandakanyekayo - kuya kufuneka uyenze inkohliso.
Ukuvezwa kabini kufuna izincedisi ezitshatileyo kwaye kusebenza ngcono ebusuku okanye kwindawo enesibane ngenxa yokuba ivaliwe kufuneka ivulwe ixesha elide.
Ukukhetha useto lwekhamera yokuvezwa kabini nge-SLR yedijithali
Ukufakela ukubonakaliswa okuphindwe kabini nge-SLR yedijithali, i-shutter yakho kufuneka ivuleke imizuzwana engama-20 okanye ngaphezulu, ke sebenzisa useto olusezantsi lwe-ISO - 100 ukuba unayo - kunye nokuvulwa okuncinci f / 22. Isithuba esincinci sikunika ubunzulu bentsimi, ekuvumela ukuba uhambe ngokukhululekileyo kwisakhelo ngaphandle kokukhathazeka ngokungagxilwe. Ubude obugxile kwi-28mm ukuya kwi-50mm ikunika kwakhona ubunzulu bentsimi. Khetha imo yoPhuculo lwangaphambili kunye nokugxilwa kweShot enye kwindawo ekugxilwe kuyo.
ungathatha i-advil nge-benadryl
Kuya kufuneka ukhwelise ikhamera kwi-tripod okanye kumphezulu oqinileyo ukuze uzinze ngexesha lokuvezwa okude, oko kuthetha ukuba awudingi ukuzinziswa komfanekiso.
Ukuthatha ukuboniswa kabini
Ukwenza ukuphindaphinda kwakho okanye umhlobo kumfanekiso omnye kufuna isicwangciso esithile. Kuya kufuneka ubhale umfanekiso kwangaphambili kwaye wazi ngqo ukuba ufuna ukuba ubuphi na xa ivaliwe.
Obu buchule budala umfanekiso othile wesiporho. Kodwa ukuba kunzima kakhulu ukubona umntu, tshintshela kwindawo enemvelaphi emnyama. Qiniseka ukuba umntu osemfanekisweni unxibe iimpahla ezichasene nemvelaphi.
Nyusa ikhamera kwi-tripod okanye uyibeke kwindawo ethe tyaba kwaye uqiniseke ukuba ikwinqanaba.
Nika amandla isibali-xesha sekhamera.
Uninzi lweekhamera zine-self-timer yesibini-yesibini, ekunika ixesha lokuhamba kwisakhelo.
Qamba i umfanekiso, kwaye ucinezele i-shutter iqhosha elisecaleni ukufezekisa ukugxila.
Gxila kwinto embindini wenkundla. Ukuvulwa okuncinci kukunika ubunzulu bentsimi, ke uya kubonakala ujolise naphi na kwisakhelo.
0027 v ipilisi yeparcocet
Cinezela iqhosha lokuvala ngokupheleleyo.
Ixesha elizimeleyo liqala ukubala phantsi. Kwiikhamera ezininzi, isibane esibomvu esidanyazayo siqala ukudanyaza ngaphambili kwekhamera. Iqala ukudanyaza ngokukhawuleza xa ikhamera sele iza kuvula i-shutter.
Yiba nesihloko-wena okanye umhlobo-hamba kwisakhelo.
imifanekiso yeepilisi ze-oxycodone
Xa ukukhanya kuyekile ukudanyaza kwaye ivaliwe ivalwe, bala kancinane ukuya kwishumi ngelixa ubambe ngxi ngokugqibeleleyo.
Ukubala kwe-11, hamba uye kwenye indawo kwisakhelo kwaye ubambe indawo kude kube shutter ivala.
Ngokuvuleka okuncinci kwe f / 22, ilensi ihlala ivulekile kangangemizuzwana engama-30.
Ukuba i-shutter ayihlali ivule ngokwaneleyo, akukho mnyama ngokwaneleyo ukuba iveze ixesha elide. Ungahambela kwindawo emnyama, linda de kube mnyama apho ukhoyo, okanye usebenzise isihluzo sobungqingqwa esingathathi hlangothi ukunciphisa ubungakanani bokukhanya okufikelela kwisenzi, ngaloo ndlela ukwandisa ixesha lokuvezwa.
l 5 ipilisi eblowu nebomvu
isiqu kunye negqabi elibonisiweyo
ungaxuba i-advil kunye ne-tylenol
Yenza i-akhawunti ye-gmail ungene
amayeza entlungu aqala ngentengiso
ungathatha i-tylenol nge-coumadin